दिप जसरी चम्किन्छ यी ४ राशिका व्यक्तिको भाग्य, सानैमा कमाउँछन् नाम र दाम !! | सुदुरपश्चिम खबर
हुन त कर्मले नै उसको भाग्य निर्धारण गर्ने गर्छ। तर ज्योतिषशास्त्रका अनुसार केही राशिका मानिस निकै भाग्यमानी हुने गर्छन्।
जसले कम उमेरमै समाजमा धन दौलत, पद, प्रतिष्ठा र मान सम्मान प्राप्त गर्छन्। यी राशिका व्यक्तिलाई अन्य राशिको तुलनामा निकै चाडो सफलता मिल्ने गर्छ।
आउनुहोस् जानौँ कुन कुन हुन् ती भाग्यमानी ४ राशि ?
मेष राशिको स्वामी ग्रह मंगल हो । ज्योतिषशास्त्रका अनुहार मंगल ग्रह अन्य ग्रहको सेनापति हो । त्यसैले मेषमाथि मंगल ग्रहको विशेष प्रभाव पर्ने गर्छ। मेष राशिका व्यक्ति एक राम्रो नेतृत्वकर्ता पनि बन्ने गर्छन्।
आफ्नो गुणका कारण समाजमा छिट्टै मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा र धन सम्पत्ति प्राप्त गर्ने गर्छन्। कुनै पनि काम पूरा गर्न यिनीहरु आफ्नो ज्यानै लगाइदिने गर्छन्। मेहनत र लगनशीलताल यिनीहरुलाई दोस्रो व्यक्तिभन्दा अलग बनाइदिन्छ।
वृश्चिक राशिको स्वामी ग्रह पनि मंगल हो । जसका कारण यी राशिका व्यक्ति निडर र साहसिक प्रवृत्तिका हुने गर्छन्। यी राशिका व्यक्ति कुनै पनि काम गर्नमा हिचकिचाउदैनन्।
यिनीहरु प्राय जोखिम लिने काम गर्छन र त्यसमा सफलता पनि मिल्ने गर्छ। कुनै पनि काम गर्नका लागि यिनीहरु आफ्नो योजना बनाउँछन् र इमान्दारीका साथ पूरा गर्ने गर्छन्।
मकर राशिको स्वामी ग्रह शनि हो । शनिलाई न्यायका देवता पनि मान्ने गरिन्छ। शनिलाई सबैभन्दा मजबुत ग्रह मानिने गरिन्छ। यसैका कारण मकर राशिका व्यक्तिमा आत्मविश्वास भरिपूर्ण हुने गर्छ।
शनि देवको विशेष कृपा दृष्टि पनि यी राशिका व्यक्तिमाथि पर्ने गर्छ। यी राशिका व्यक्ति मेहनत र लगनशीलताले आफ्नो खास पहिचान बनाउने गर्छन्।
कुम्भ राशिका व्यक्तिले इमान्दारीबाटै नाम र प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने गर्छन्। कुनै पनि काम गर्नका लागि यी राशिका व्यक्तिले पूरै योजना बनाउने गर्छन्। जुन काम सोचविचार गरेर गर्छन्।
यी राशिका व्यक्तिको स्वभाव गम्भिर र दिमाग तेज हुने गर्छ। यिनीहरु जुन कुनै काम पनि परिस्थिति अनुसार गर्ने गर्छन्। अन्य राशिको तुलनामा यी राशिका व्यक्ति शक्तिशाली पनि हुने गर्छन्। (नयाँ पुस्ता बाट सभार)